Blackmagic Design dia manambara vaovao ATEM Mini Pro ISO | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner sy mpamokatra ny NAB Show LIVE. News Engineering Engineering
Home » Vaovao » Ny endrika mainty Blackmagic dia manambara vaovao ATEM Mini Pro ISO
Fremont, CA, USA - Alakamisy 30 Jolay 2020 - Blackmagic Design androany dia nanambara ny ATEM Mini Pro ISO, mpamadika famokarana vidiana vidiny lafo vidy vaovao miaraka amin'ny motera fandraketana renirano vaovao miisa 5 izay mamela ny fidiran'ny horonan-tsary rehetra ho voarakitra mamela ny famoahana mivantana havaozina aorian'ny hetsika. Io dia ahafahan'ny mpampiasa mahazo fahana madio amin'ny fampiasa rehetra ary hampiasa lozisialy fanovana multi-cam lozisialy hanovana taty aoriana. ATEM Mini Pro ISO koa dia mirakitra ireo rakitra audio rehetra, sary amin'ny dobo haino aman-jery ary fisie tetikasa DaVinci Resolve, noho izany ny famokarana mivantana dia azo sokafana sy ahitsy amin'ny tsindry tokana!
ATEM Mini Pro ISO azo alaina eo noho eo Blackmagic Design ny mpivarotra eran-tany dia mitentina 895 $ US.
Ny mpandova ATEM Mini dia manamora ny famoronana famokarana fakan-tsary matihanina ho an'ny streaming mivantana amin'ny YouTube sy fampisehoana orinasa vaovao mampiasa Skype na Zoom. Ampifandraiso amin'ny ATEM Mini fotsiny ny mpanjifa ary afaka miova mivantana eo anelanelan'ny fampidirana fakan-tsary miisa 4 avo lenta ho an'ny sary tsara kalitao tsara kokoa. Na mampifandraisa solosaina ho an'ny slide PowerPoint na lalao konsoly. Ny namboarina tao amin'ny DVE dia mamela sary mampihetsi-po amin'ny sary, mety tsara amin'ny fanehoan-kevitra.
Betsaka ny effets vidéo koa. Ny maodely ATEM Mini rehetra dia misy USB miasa toa ny webcam ka afaka mampiasa rindranasa streaming avokoa ny mpanjifa raha ny maodely ATEM Mini Pro kosa mampiditra streaming mivantana sy fandraisam-peo amin'ny kapila USB. Misy koa HDMI mivoaka ho an'ny projectors. Ny fampidirana mikrô dia manome alalàn'ny birao avo lenta sy sary an-tsokosoko ho an'ny dinidinika sy fampisehoana.
Ny ATEM Mini's compact rehetra ao anaty famolavolana iray dia misy tontonana fanaraha-maso ary koa fifandraisana. Ny tontonana eo aloha dia ahitana bokotra mora ampiasaina amin'ny fisafidianana loharanom-pahalalana, ny voka-dratsin'ny video ary ny tetezamita. Ao amin'ny maodelin ATEM Mini Pro dia mahazo bokotra ihany koa ny mpanjifa amin'ny fifehezana ny rakipeo sy ny streaming ary koa ny bokotra fifantenana output izay mamela ny mpanjifa hanova ny fivoahan'ny horonantsary eo anelanelan'ny fakantsary, programa ary multiview. Ao amin'ny tontonana aoriana misy HDMI fifandraisana ho an'ny fakan-tsary na solosaina, fampidirana mikrôzôkôjia fanampiny, USB ho an'ny webcam an-tsary an-tsary HDMI Output "aux" ho an'ny horonantsary fandaharana.
Ity maodely ity dia manampy fandraketana horonantsary horonantsary H.5 misaraka 264 amin'ny fotoana tena izy. Ity dia fahana madio amin'ny fampiasa rehetra ary miampy ny fandaharana mivantana. Ny rakitra tetikasa DaVinci Resolve koa dia voatahiry mba hahafahan'ny mpanjifa manokatra ny famokarana mivantana azy ireo mba hanitsiana ny fanovana, fanovana tifitra, famerenana feo ary manampy fanitsiana loko.
Ny maodely ATEM Mini Pro ISO dia mamela ny mpanjifa hanova ny hetsika mivantana ataon'izy ireo satria afaka mirakitra renirano horonantsary 5 izy, ao anatin'izany ny fahana madio amin'ny fampiasa rehetra sy ny fandraisam-peo fandaharana, amin'ny fotoana iray ihany. Ny sary dobo haino aman-jery ampiasaina dia voatahiry miaraka amin'ireo rakitra an-tsary ihany koa. Ny rakitra video dia misy tag metadata toy ny timecode sy ny isa fakan-tsary. Alao an-tsaina ny fanitsiana ny seho misy azy ireo miaraka amin'ny naoty miloko, effets ary sary vaovao. Na ny loharanom-peo aza dia voarakitra an-tsoratra mba hahafahan'ny mpanjifa mamerina manova ny feon'izy ireo.
Ny maodelin'ny ATEM Mini Pro ISO dia afaka mamonjy rakitra fisie DaVinci Resolve ihany koa, ka amin'ny tsindry tokana dia afaka manokatra ny famokarana mivantana azy ireo ny mpanjifa amin'ny fanovana horonantsary. Ny fanapahana, ny fandravana ary ny haino aman-jery pool pool rehetra dia ho entina. Midika izany fa afaka manatsara ny fanovana ireo teboka na manolo tanteraka ny tifitra aza ny mpanjifa. Ny DaVinci Resolve Sync Bin dia mamela ny mpanjifa hisafidy tifitra vaovao amin'ny alàlan'ny multiview ka mora ampiasaina. Ny mpanjifa aza afaka mamerina mamaky any amin'ireo rakitra fakan-tsary Blackmagic RAW noho ny fanitsiana fanitsiana loko matihanina sy famaranana Ultra HD.
Tsy mbola nisy mpanelanelana mora ampiasaina kokoa, satria tsindrio fotsiny ny mpanjifa ny bokotra fampidirana misy soratra hoe 1 ka hatramin'ny 4 eo amin'ny tontonana eo aloha mba hanapaka eo anelanelan'ny loharanom-pahalalana. Ny mpanjifa dia afaka misafidy ny tetezamita tapaka na ny vokany amin'ny alàlan'ny fisafidianana ny bokotra tapaka na fiara. Tsy toy ny notapahana, ny bokotra mandeha amin'ny fiara dia milaza amin'ny ATEM Mini mba hampiasa vokar-tsarimihetsika rehefa mifindra input. Ny mpanjifa dia afaka misafidy amin'ireo tetezamita mampihetsi-po toy ny famoahana, na ny fiatraikany mampientanentana kokoa toy ny milentika amin'ny loko, ny fametahana DVE ary ny fanerena DVE. Ny DVE dia mety tsara amin'ny sary eo amin'ny sary ary afaka manangana toerana samihafa ny mpanjifa avy hatrany.
Miaraka amin'ny 4 mahaleo tena HDMI fampidirana, ny mpanjifa dia afaka mampifandray fakan-tsary miisa 4 avo lenta. Ny loharanom-pahalalana horonantsary rehetra dia hampifandray indray amin'ny mpanova raha miasa amin'ny fenitry ny horonantsary samihafa izy ireo ka tsy tokony hatahotra ny mpanjifa amin'ny fampifandraisana fitaovana video satria miasa daholo izy rehetra. Alao an-tsaina ny fanararaotana ny fahaizan'ny hazavana ambany amin'ny fakantsary tsara kokoa ho an'ny famokarana teatra, fampakaram-bady, kaonseritra an-tsekoly ary horonan-tsary.
Ny maodely ATEM Mini Pro dia manana motera fandefasana fitaovana ho an'ny streaming mivantana amin'ny alàlan'ny fifandraisana ethernet. Midika izany fa afaka mivezivezy mivantana amin'ny YouTube, Facebook ary Twitch ny mpanjifa amin'ny kalitao tsaratsara kokoa, tsy misy rindranasa milatsaka ary misy fipetrahana tsotra kokoa. Safidio fotsiny ny serivisy mivantana ary ampidiro ny lakilen'ny streaming. Misy palety ao amin'ny ATEM Software Control amin'ny fametrahana streaming, miampy ny statut streaming dia aseho amin'ny multiview ihany koa. Mora takatra ny satan'ny streaming satria ny tondro ny tahan'ny angon-drakitra dia mampiseho ny hafainganan'ny Internet takian'ny mpampiasa format video.
Ny maodely ATEM Mini Pro koa dia manohana ny firaketana mivantana ny angon-drakitra alefan'izy ireo amin'ny kapila tselatra USB. Midika izany fa ny mpanjifa dia mahazo rakipeo lava be amin'ireo rakitra video H.264 iray ihany miaraka amina feo AAC izay navoakan'ny mpanjifa, mba hahafahan'ny mpanjifa mampakatra mivantana amin'ny tranokala video an-tserasera toa an'i YouTube sy Vimeo. ATEM Mini Pro dia manohana kapila marobe rehefa ampiasaina amin'ny hub USB na Blackmagic MultiDock, ka rehefa fenoina kapila iray dia afaka manohy kapila faharoa ho an'ny fandraisam-peo tsy miato. Ny fametrahana ny firaketana an-tsoratra sy ny safidin'ny kapila dia napetraka ao amin'ny ATEM Software Control ary misy fijery ny firaketana an-tsoratra ao anaty multiview namboarina.
Mba hiantohana ny fifanarahana faran'izay betsaka, ATEM Mini dia manasongadina fifandraisana USB izay miasa ho loharanom-pahalalana webcam tsotra. Midika izany fa afaka miditra ny mpanjifa ary miasa miaraka amina rindrambaiko misy horonantsary. Voafitaka ny rindrambaiko amin'ny fieritreretana fa Webcam iraisana ny ATEM Mini, fa tena mpamindra famokarana mivantana. Izany dia manome antoka ny fifandanjana feno amin'ireo rindrambaiko video sy amin'ny kalitao 1080HD feno. ATEM Mini dia miasa miaraka amin'ny rindrambaiko sy ny sehatra toa ny Open Broadcaster, XSplit Broadcaster, YouTube Live, Facebook Live, Skype, Zoom, Twitch, Periscope, Livestream, Wirecast ary maro hafa.
Samy 4 HDMI manasongadina ireo mpanova fenitra manokana natokana azy ireo. Midika izany fa ny ATEM Mini dia hiova ho azy ny loharano 1080p, 1080i ary 720p ho fenon'ny horonan-tsarin'ny mpanova. The HDMI output dia famoahana "aux" marina ka afaka manadio ny switch tsirairay avy ny mpanjifa HDMI fampidirana na programa amin'ity famoahana ity. Raha mampiasa fandaharam-potoana / fijerena ny mpampiasa, ny HDMI azo nofidina mialoha hiseho, na ao amin'ny modely ATEM Mini Pro, azo atao ny maneho fisehoana multiview feno.
Ny fampiharana ATEM Software Control dia mamaha ny hery miafina ATEM Mini ary mamela ny fidirana amin'ny endri-javatra rehetra ao amin'ny mpanova. ATEM Software Control dia manasongadina ny fampiasa ho an'ny mpampiasa switch switch miaraka amina palette parabètre ho fanitsiana haingana. Na dia afaka mifandray amin'ny alalàn'ny USB aza ny mpanjifa, raha toa ka mifandray amin'ny Ethernet ny mpanjifa dia azo atao ny mampifandray amin'ny ATEM Mini ireo mpampiasa marobe amin'ny alàlan'ny kopian'ny ATEM Software Control misaraka amin'ny solosaina samihafa.
Ilay namboarina tao anaty «pisinina haino aman-jery» dia mamela ny famoahana sary sarimihetsika RGBA miisa 20 misaraka amin'ny lohateny, takelaka fanokafana ary logo. Ny sary dia azo alefa amin'ny alàlan'ny ATEM Software Control na alaina mivantana avy amin'ny Photoshop amin'ny alàlan'ny plug-in ATEM Photoshop.
Ho an'ny vaovao na ny asa fampisehoana an-tserasera, tonga lafatra ny ATEM Mini satria manana ATEM Advanced Chroma Key miakatra miaraka amin'ny keyer fanampiny hilatsaka. Ny mpanjifa aza dia afaka mampiasa azy io amin'ny fametahana lohateny amin'ny alàlan'ny famoronana sary misy ambadika maitso na manga ary ny keyer dia handondona ny maitso ary hanao mangarahara ny aoriana.
Rehefa manao famokarana mivantana lehibe kokoa miaraka amina fakan-tsary marobe dia ilaina tokoa ny mahita ny loharanom-pahalalan'izy ireo miaraka amin'ny monitor iray. Ny maodelin'ny ATEM Mini Pro dia misy multiview matihanina ahafahan'ny mpanjifa mahita ny fampidirana horonantsary 4 rehetra, miampy ny topy maso sy programa amin'ny tokana HDMI televiziona na monitor. Ny fijerin'ny fakantsary tsirairay dia misy tondro isa mba hahafantaran'ny mpanjifa isaky ny loharano eny an-habakabaka, ary ny fijerena tsirairay koa dia manana labozia sy metatra am-peo. Afaka mahita ny haino aman-jery media ihany koa ny mpanjifa mba hahafantaran'ny mpanjifa izay sary voafantina. Plus multiview dia misy koa ny toerana misy ny fandraisam-peo, ny streaming ary ny mixer audio Fairlight.
Miaraka amin'ny mixer audio Fairlight namboarina, ATEM Mini dia ahafahana manao fampifangaroana feo mivantana sarotra. Ilay mixer ao anatiny dia misy fantsona 12 feno mba hahafahan'ny mpanjifa mifangaro audio avy amin'ny loharano rehetra. Feo izany avy amin'ny rehetra HDMI loharano sy ny fampidirana mic stereo 2. Ny fantsom-pandefasana tsirairay dia misy ny EQ parametric avo lenta avo indrindra sy ny compressor, limiter, expander ary vavahady mitabataba ary koa ny fanamoriana feno.
"Ity maodely vaovao ATEM Mini ity dia tena fanavaozana ny fivezivezena. Sambany, ny famokarana mivantana dia nampidirina tanteraka ao anaty alàlan'ny asa fanontana lahatsoratra famokarana. Tsy izany ihany, fa amin'ny fampidirana Blackmagic RAW, azontsika atao ny mampiasa ireo rakitra ISO voarakitra ao amin'ny switch, na ireo rakitra voarakitra ao amin'ny fakantsary. ” hoy i Grant Petty, Blackmagic Design PDG. “Izany dia ny workflow RAW film, ny workflow amin'ny famokarana post ary ny workflow amin'ny famokarana mivantana izay tafiditra tao anatin'ny fotoana voalohany! Alao an-tsaina ny manao an Ultra HD tompony graded master rehetra avy amin'ny vidiny kely HD switcher. Tena mampientam-po izy io ary hiteraka làlam-piasana vaovao ho an'ny indostrian'ny fahitalavitra! ”
Manasongadina famolavolana tontonana mifehy miniaturised.
Namboarina ho fanohanana ny fandraisam-peo ny fidirana tsirairay ho fisie ISO misaraka.
Mitahiry rakitra rakitra DaVinci Resolve ho an'ny fanovana 1 tsindry ny famokarana mivantana.
Manohana ny fampifandraisana hatramin'ny fakan-tsary na solosaina 4.
Fandefasana mivantana amin'ny alàlan'ny Ethernet izay tohanan'ny ATEM Mini Pro.
Ny output USB dia miasa ho toy ny webcam ary manohana ny rindrambaiko video rehetra.
Manova sy manova avokoa ny fenitra mahazatra HDMI inputs.
Ahitana ATEM Software Control maimaimpoana ho an'ny Mac sy Windows.
Haino aman-jery anatiny ho an'ny sary 20 RGBA ho an'ny lohateny, takelaka fanokafana ary logo.
Ahitana ATEM Advanced Chroma Key ho an'ny asan'ny efijery maitso / manga.
Multiview dia mamela ny fanaraha-maso ny fakantsary rehetra ao amin'ny ATEM Mini Pro.
Audio mixer manohana limiter, compressor, 6 band EQ ary maro hafa!
Ny ATEM Mini Pro ISO dia azo alaina amin'izao fotoana izao ho an'ny US $ 895, tsy anisany ny adidy sy hetra ao an-toerana, Blackmagic Design mpivarotra manerantany.
Sarin'ny vokatra an'ny ATEM Mini Pro ISO, ary koa ny hafa rehetra Blackmagic Design Vokatra, azo jerena ao amin'ny www.blackmagicdesign.com/media/images.
Momba ny Blackmagic Design
Blackmagic Design miteraka izao tontolo izao ny faran'izay tsara Video fanovana vokatra, Hafanàm-po an sarimihetsika fakan-tsary, loko correctors, Video converters, lahatsary fanaraha-maso, router, velona famokarana switchers, kapila recorders, waveform mpanaramaso sy ny tena fotoana sarimihetsika skanera ny endri-javatra sarimihetsika, lahatsoratra famokarana sy fahitalavitra fandaharana orinasa. Blackmagic DesignNy karatra fisamborana DeckLink dia nanangana revolisiona iray amin'ny kalitao sy ny fahaizan'ny famokarana post, raha ny vokatra Emmy ™ nahazo ny lokan'ny DaVinci nahazo ny lokan'ny orinasa dia nanjakazaka tamin'ny indostrian'ny fahitalavitra sy ny sarimihetsika nanomboka ny taona 1984. Blackmagic Design Mbola mitohy tany fandikana fanavaozana anisan'izany 6G-SDI sy 12G-SDI vokatra sy stereoscopic 3D ary Ultra HD workflows. Izao tontolo izao natsangan'ny lahatsoratra nitarika ny famokarana sy tonian-dahatsoratra injeniera, Blackmagic Design manana birao any Etazonia, UK, Japan, Singapore ary Australia. Raha mila fanazavana fanampiny, mankanesa any www.blackmagicdesign.com.
Posts by Zazil farany Media (jereo rehetra)
Colourlab Ai Mipoitra mba hanavao ny famokarana aorian'ny famoahana azy - Novambra 24, 2020
Fetiben'ny literatiora Cheltenham Powered by Blackmagic Design - Novambra 20, 2020
Blackmagic Design dia manambara maodely 3G Converter Micro vaovao - Novambra 19, 2020
Previous: Ny Bluefish444 dia manampy ny fanohanan'ny KRONOS K8 ho an'ny Foundry Nuke sy Nuke Studio 12 miaraka amin'ny Windows 2020.14.0 Fametrahana Package
Next: Blackmagic Design dia manambara ny tetezana mikoriana ATEM vaovao